Dib u soo celinta tallaalka adduunka ayaa dhiirrigelisay soo noqoshada safarka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dib-u-dhiska » Dib u soo celinta tallaalka adduunka ayaa dhiirrigelisay soo noqoshada safarka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • saaciday inay • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Dabeecadaha socotada iyo dookhyada ayaa si aad ah isu beddelay sanadkii la soo dhaafay
Warka CDC wuxuu ka dhigay 43% dadka Mareykanka inay dareemaan raaxo badan safarka
Bilowgii 2021 waxay aragtay socdaal inuu dhinac u rogo mugga raadinta bil kasta oo muujinaya koritaan xoog leh
Dad badan oo safrayaa waxay sii wadaan inay mudnaanta ka siiyaan gudaha safarkooda caalamiga ah waxayna galayaan safarro ku dhow guryahooda
Warbixinta Isbeddellada Soo-kabashada Safarka ee Q1 2021 ayaa maanta la soo saaray. Warbixinta isbeddelka seddexdii biloodba mar waxaa ku jira xog laga helay cilmi baarista caadada ah iyo Kooxda Expedia Xogta-koowaad ee kooxda oo ay weheliso aragtiyo ficil ah si loo hubiyo in calaamadaha safarka ay sida ugu wanaagsan ugu diyaar garoobeen inay dib isugu xirmaan oo ay dib ula falgalaan socdaalayaasha maaddaama safarka gu'ga iyo xagaaga ay soo kordhayaan.
Dabeecadaha musaafiriinta iyo dookhyadooda ayaa si aad ah isu beddelay sanadkii la soo dhaafay, taasoo la micno ah in calaamadaha safarku aysan mar dambe ku tiirsanaan karin xeeladaha suuq-geynta taariikhiga ah si ay ugu wargaliyaan qorshahooda soo kabashada. Khubarada warshadaha waxay ogyihiin in dadku ay jecelyihiin inay markale bilaabaan safarka, laakiin sida ay ula macaamilaan sumadaha safarka, iyo waxa ay filayaan, ayaa isbadalay. Warbixintani waxay muujineysaa xogtii ugu dambeysay iyo isbeddellada ka caawinaya sumadaha safarka inay soo saaraan istiraatiijiyado, farriin iyo nuxur la jaanqaadaya waxa ay socotadu rabaan - oo ay u baahan yihiin - si ay u ballansadaan safarkooda soo socda.
Waxyaabaha muhiimka ah ee laga helay Q1 2021 Warbixintii ka soo kabashada Safarka waxaa ka mid ah:
Jadwalka Tallaalka Caalamiga ah wuxuu kicinayaa soo noqoshada safarka
Kadib sanad qasan oo ku saabsan warshadaha safarka ee 2020, bilawgii 2021 wuxuu arkay safarka xagal leh mugyo raadis bille ah oo muujinaya koritaan xoog leh Q1 oo dhan. Kordhinta raadinta iyo dalabka socdaalka waxay kuxirantahay xawaaraha sii kordhaya ee soo saarida talaalada COVID-19 iyo tilmaamaha safarka.
Mid ka mid ah soo saarista tallaalka adduunka ee horseedka ka ah, isbeddellada raadinta ee Mareykanka waxay muujinayaan isku xirnaanta udhaxeysa ogeysiisyada tallaalka waaweyn iyo koritaanka raadinta usbuuc-usbuuc. Baadhitaanno usbuuc ka badan, usbuucii 15-kii Maarso waxay arkeen kororkii ugu weynaa ee baaritaannada - koror 30% ah - ka dib markii Xarunta Xakamaynta Cudurrada (CDC) ay soo saartay tilmaamaha shaqsiyaadka si buuxda loo tallaalay. Warka CDC wuxuu ka dhigay 43% dadka Mareykanka inay dareemaan raaxo badan safarka - ama u kexeeyeen si ay u ballansadaan safar soo socda.
Daaqadda Raadinta Caalamiga ah ayaa Hadhay Gaaban
Sii wadida isbeddellada la arkay inta badan sanadkii la soo dhaafay, inta badan raadinta caalamiga ah ee Q1 2021 waxay ku dhacday 0 illaa 21 maalmood daaqad raadinta, maaddaama hubin la'aanta safarka adduunka ay aragtay safarradu inay doorbidaan fursado badan, safarro gaagaaban, oo inta badan ku dhow guriga. In kasta oo qaabkani u muuqdo inuu sii xoogeysanayo safarada gudaha, daaqadaha raadinta dheer ee safarada caalamiga ayaa bilaabanaya inay soo baxaan.
Isbeddelkan ayaa si gaar ah loogu muujiyey gobolka EMEA, halkaas oo baadhitaannada 91 maalmood ka baxsan ama ka sii dheer ay matalayaan ku dhowaad 40% ee raadinta caalamiga ah ee la sameeyey Q1 2021, oo laga soo qaaday illaa 25% Q4 2020. Tani waa war wanaagsan oo loogu talagalay 'liiska baaldiga' ama hal mar Noocyada-noolasha ah meelaha loo dalxiis tago ama soojiidashada raadinaya inay soo jiitaan socdaalayaasha dhaadheer.
safarka adduunka soo kabashada dalxiiska